औषधिको गुणस्तरबारे जनतालाई सचेत बनाऔँः स्वास्थ्यमन्त्री
उपभोक्तालाई औषधिको गुणस्तर र सुरक्षाका दृष्टिबाट सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । औषधि व्यवस्था विभागको समीक्षा गोष्ठीमा शुक्रबार स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले औषधि मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले गुणस्तरमा सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि अधिकांश उपभोक्ताले औषधिको म्यादसमेत हेर्न नजान्दा जोखिममा पर्ने गरेका छन्, त्यसतर्फ विभागले ध्यान दिन सक्नुपर्नेपर्छ ।” मन्त्री पोखरेलले औषधि व्यवस्था विभाग केन्द्रीयस्तरबाट देशभर प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा विभागलाई विस्तार गरेर प्रभावकारीरुपबाट अघि बढाइने बताउनुभयो । औषधि ऐनलाई अघि बढाउने जानकारी दिँदै उहाँले नेपाली औषधि उत्पादकलाई ...
भरिन सक्छ मधुमेह रोगीको घाउ
मधुमेहका रोगीहरूलाई कथंकदाचित् चोटपटक लागे लामो समय त्यसैले दु:ख दिने गरेको छ । घाउ निको नभएर अंगविशेष काटेरै फ्याँक्नुपर्ने अवस्था पनि आउने गरेको छ । अब त्यस्ता दिन गएजस्तो छ । घाउ निको हुने नयाँ तरिका पत्ता लागेको छ । जर्नल अफ डर्मेटोलजीमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार, नयाँ उपचार प्रक्रियाका माध्यमले मधुमेहका रोगीको घाउ निको पार्नमा सफलता पाइएको छ । मधुमेह रोगीको चोटग्रस्त अंग काट्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने देखिएको छ । मधुमेहका रोगीलाई प्राय: खुट्टामा घाउ हुने गर्छ । खराब रक्त सञ्चारका कारण यस्तो घाउ निको पार्न धेरै ...
बोसोले बेफाइदा मात्रै गर्दैन
-तपाईं तौल घटाउने चक्करमा वा तौल नबढोस् भनेर कम बोसोयुक्त (लो फ्याट) भोजन गरिरहनुभएको छ भने एकपटक पुन: सोच्नुस् । बोसोले बेफाइदा मात्रै गर्दैन । पाँच महाद्वीपका १ लाख ३५ हजार व्यक्तिमा करिब सात वर्षसम्म गरिएको एउटा अनुसन्धानमा यस्तै दाबी गरिएको छ, जुन ‘ल्यान्सेट’ मा प्रकाशित छ । उक्त अध्ययनको दाबीअनुसार, कम बोसो भएको खाना तपाईंको दीर्घायुका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक छ । यदि घ्यू, मक्खन जस्ता बोसोयुक्त वस्तुलाई खानपिनमा उपयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंको उमेर बढ्छ । कम बोसो भएको खाना खानाले असमय मृत्यु हुने आशंका ...
नेपाललगायत दक्षिण–पूर्वी एसियामा अझै बालबालिकाको मृत्युको एउटा कारक हो– दादुरा । यस्तो गम्भीर रोगबाट छुटकारा पाउने उपाय भने गाह्रो छैन । बालबालिकालाई समयमा जम्मा दुई मात्रा खोप लगाउन सके उनीहरूलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ । दादुराका कारण वर्षेनी विश्वव्यापी रूपमा अझै १ लाख ३४ हजार २ सय बालबालिकाको मृत्यु हुने अनुमान छ । यीमध्ये ५४ हजार ५ सय बालबालिका दक्षिण–पूर्वी एसियाका हुने गरेका छन् । ‘दादुराको खोप दुई मात्रा लगाए पनि यसको प्रभावकारिता लगभग शतप्रतिशत हुन्छ,’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), दक्षिण–पूर्वी एसिया कार्यालय, फयामिली हेल्थ, ...
ओम अस्पतालको ओपीडी सेवा खुल्यो
नाकको शल्यक्रिया गराउन ओम अस्पताल पुगेकी ४० वर्षीया कमला भट्टराईको मृत्युलाई लिएर भएको विवादका कारण बुधवारदेखि बन्द ओम अस्पतालको आपीडी सेवा शुक्रबारदेखि खुलेको छ । ओम अस्पतालले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गरी पीडित पक्ष र अस्पताल प्रशासनबीच भएको सहमति अनुसार बन्द ओपीडी सेवा खुलाइएको जनाएको छ । ओम अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक बाबुकाजी कार्कीद्धारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भट्टराईको निधनका विषयमा सतयतथ्य छानविन गर्न पीडित पक्ष र अस्पताल पक्षबाटस्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्चस्तरीय छानविन समितिलाई सहयोग गर्ने सहमति भएकोले शुक्रवारदेखि अस्पतालको ओपीडीसहित सम्पूर्ण सेवा यथावत रुपमा सञ्चालन भइरहेको अवगत गराउछौ ।’
छोरी छिल्लिँदा उनलाई मजा आउँछ । घुक्र्याउँदा रमाइलो लाग्छ र फुल्लिँदा आनन्द आउँछ । अनि उनको मातृत्व पग्लिएर आउँछ । छोरी समृद्धिको मधुर मुस्कान नै उनका लागि जीवनको असली सुख-समृद्धि हो । छोरीका साना, पुक्क परेका, कोमल हातहरु आफ्ना गालामा सल्बलाउँदा उनलाई वास्तवमै ‘आमा’ हुनुको गर्व बोध हुन्छ । मौका मिल्दा, छोरीसँगै खेल्छिन् । कार्टुन हेर्छिन् । सोफामा लडीबुडी गर्छिन् । कथा सुनाउँछिन् । पूजाआजा गर्छिन् । गायत्री मन्त्र सुनाउँछिन् । मम बनाएर ख्वाउँछिन् । छोरीसँग बस्दा, खेल्दा, गफ गर्दा घडीका काँटाहरु कति छिटो घुम्छन्, उनलाई पत्तो नै ...
विज्ञापनले बिगार्‍यो बानी: ‘कर्नफ्लेक्स’ हैन मकै-भटमास खाउँ
टेलिभिजन च्यानलहरुमा दिनहुँ विभिन्न सप्लीमेन्ट, टनीक र डिब्बा बन्द ‘पौष्टीक पदार्थ’हरुका विज्ञापन प्रशारण भइरहेका हुन्छन् । कतिपय विज्ञापनमा कुनै सेलीब्रेटीबाट भन्न लगाइएको हुन्छ, ‘५० बर्षपछि घरको खानाले तपाईलाई पोषण पुग्दैन । तपाईले बाहिरको प्रोटिन, भिटामीन, सुक्ष्म तत्वभएको खाना खानुपर्छ । पौष्टिकताले भरपुर यो चिज खानुस्, तपाईको माइसपेशी र हड्डीबलियो बन्छ ।’ विज्ञापनले औल्याएको प्याकेट, सिसी या डिब्बावाल खाना खाएपछि बच्चाले फुटबलमा गोल गरेको, पढाईमा फस्र्ट ल्याएको या बृद्ध-वृद्धा तन्दूरुस्त र भएको देखाउन खोजिएको हुन्छ । त्यस्ता विज्ञापन बारम्बार हेरेपछि बालकदेखि बृद्धसम्मको मनमा साँच्चै हो कि भन्ने भ्रम ...
एप्पल एट र एट प्लसः के-के छन् फरक ?
एप्पलले आफ्नो दशौँ वर्षगाँठ स्मार्टफोन एप्पल एक्ससँगै आफ्ना नियमित नयाँ संस्करणका दुई स्मार्टफोन, आइफोन एट र एट प्लस सार्वजनिक गरेको छ । विद्यमान आइफोन सेभेन र सेभन प्लसका ‘सक्सेसर्स’ को रुपमा रहेका एट र एट प्लसको प्रि अर्डर सेप्टेम्बर १५ देखि सुरु हुनेछ भने सेप्टेम्बर २२ मा बजारमा उपलब्ध हुनेछन् । सानो आकारको आइफोन ८ को साइज ४.७ इन्चको हुने छ भने आइफोन ८ प्लस ५.५ इन्चको साइजमा उपलब्ध हुने छ । दुवैमा रेटिना एचडी डिस्प्ले छ । यसमा कम्पनीको सवैभन्दा आधुनिक ए११ चिप प्रयोग गरिएको छ ...
कानको जाली फाटेको छ ? यसो गरौ
कानको जाली फाट्नाले सुन्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । कानमा पीडा हुन्छ । सानोतिनो असावधानीमा पनि कानमा संक्रमण हुने भय हुन्छ । कानको झिल्ली एवं जाली च्यातिनुको केहि कारण हुन्छन् । जस्तो यसमा संक्रमण हुँदा । कानमा दबाव, चोट लाग्ने जस्ता कारणले पनि कानको जाली फाट्छ । किन सुन्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ? आवाज जब कानमा प्रवेश गर्छ, तब कानको पर्दामा कम्पन हुन्छ । यो कम्पनले मस्तिष्कमा संकेत दिन्छ । तर, कानको पर्दामा प्वाल पर्‍यो भने यसको असर सुन्ने क्षमतामा पर्छ । पर्दामा प्वाल परेपछि सुन्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ...
मृत्त कोशिका र छिद्रमा जमेको मैला हटाएर यसरी पाउनुहोस् चम्किलो अनुहार
अहिले प्रदूषण र असन्तुलित खानपानको कारण स्वास्थ्यका साथै छालामा पनि असर परिरहेका छ । यसैको कारण छालामा डन्डिफोर आउने, दाग बस्ने, रुखो हुने समस्या देखिन्छ । धुँवा, धूलोले गर्दा छालामा अनेकौ मैला जम्न पुग्छ । त्यसमाथि मृत्र कोशिकाले छालाको सौन्दर्य फिका बनाउँछ । मृत्त छाला एवं डेथ स्किन एक यस्तो अवस्था हो, जसलाई हरेक व्यक्तिले सामना गर्नुपर्छ । मृत्त छालाले नयाँ छालाको निर्माण वाधा पुर्‍याउँछ । यद्यपी यसबाट छुटकारा पाउनका लागि अनेकौ उपाय छन् । घरेलु विधीबाट समेत मृत्त छाला हटाएर छालामा ताजगी ल्याउन सकिन्छ । – ...
छाला स्वस्थ राख्न पुरुषले यसो गरौँ
घाममा नबस्ने, छालालाई सफा बनाएर राख्ने । मोइस्चराइजिङ क्रिम लगाउने । दिनमा दुईपटक अनुहार धुने । नुहाइसकेपछि अनुहार क्लिन्जरले मसाज गरी पखाल्ने । घामबाट जोगिन सन्सक्रिम, सनब्लक क्रिम लगाउने ।
सावधान ! दिनमा तीन कपभन्दा बढी चिया नपिउनुहोस्
तपाईं दिनमा कति कप चिया पिउनुहुन्छ ? यदि तीन कपभन्दा बढी चिया पिउने बानी छ भने आजैदेखि त्याग्नुहोस् । त्यसो त नेपाली समाजमा चिया खाने बानी एक खालको फेसन नै बनेको छ । दिनको सुरुवात नै चियाबाट हुन्छ । तर, अत्यधिक चिया खाने मानिसलाई विभिन्न खालका समस्याले घेर्ने हालै गरिएको एक अध्ययनले जनाएको छ । अध्ययनअनुसार दिनमा तीन कपभन्दा बढी चिया पिउने मानिसलाई विभिन्न समस्याले सताउने गरेको भेटिएको छ । डाइटिसियन डा. अलका दुवेका अनुसार चियामा कैफिन हुन्छ । यसबाहेक चियामा न्युटिएन्ट्स पनि पाइन्छ । ...
स्मरण र एकाग्रता बढाउन के गर्ने ?
योग हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । आजभोलि धेरैजसो मानिस स्मरण र एकाग्रता नभएको गुनासो गरिरहन्छन् । योगले हाम्रो दैनिकी परिवर्तन गर्नुका साथै धेरै रोग निको पार्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ । हाम्रो सौखिन जीवनशैलीले शरीरमा विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । निरन्तर गरिएको योगले शरीरका अंगलाई तन्दुरुस्त राख्छ । यसले दिमागलाई पनि तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ । सबैभन्दा पहिले योगम्याटमा आरामसँग बस्नुहोस् । आसनमा बसेपछि ढाड र गर्दनलाई सीधा पार्नुपर्छ । श्वासलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ । दिमागलाई स्वस्थ राख्न श्वासप्रश्वासको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अब शरीरलाई हल्कासँग ...
सदरमुकाम चरिकोटस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै दिनहुँ ५०, अरु स्वास्थ्य संस्थाको तथ्याँक हेर्दा करिब १०० को हाराहारीमा दैनिक उच्च ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी आउने गरेका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका मेडिकल डाइरेक्टर डा विनोद दंगालले विगतका दिनमा भन्दा एक सातायता ५० भन्दा बढी उच्च ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी आउने गरेका बताउनुभयो । ग्रामीण भेगमा रहेका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिएको तथ्याँकमा अन्य समयमा भन्दा एक सातायता ७५ प्रतिशत उच्च ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी आउने गरेको जनाइएको छ । यता सामुदायिक अस्पतालमा दैनिक १० देखि १५ जनासम्म ...
झापामा पछिल्लो समयमा एचआइभी(एड्स) संक्रमितकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या घट्दै गएको पाइएको छ । तीन वर्षमा १६ संक्रमितको मृत्यु भएको झापामा आव २०७३÷७४ असार मसान्तसम्मको एक वर्षमा तीन संक्रमितको मात्र मृत्यु भएको नाइट चेस क्लब अफ भद्रपुरले जनाएको छ । मेची अञ्चल अस्पताललगायत विभिन्न अस्पतालमा प्राप्त सुविधायुक्त प्रविधि र उचित उपचार सेवाकै कारण संक्रमितबाट मृत्यु हुनेको संख्या घट्दै जान लागेको क्लबका परियोजना प्रमुख गोविन्द पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतका विभिन्न स्थानमा जाने र नेपाल फर्किने गर्दा संक्रमित झापामा बढ्ने गरे पनि पछिल्लो समयमा भने ...
काँकडभिट्टामा ‘दिब्यज्योति आइ इयर केयर सेन्टर’ नामक स्वास्थ्य क्लिनिक अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । आँखा, नाक, कान र घाँटीको उपचार एकै थलोमा गर्ने भन्दै गत भदौ पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएको सो क्लिनिकले सम्बन्ध निकायबाट सञ्चालनको अनुमति नलिई शल्यक्रियालगायतका उपचार थालिसकेको छ । स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्लिनिक वा संस्था सञ्चालन गर्नका लागि कानूनबमोजिम जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर दिब्यज्योति आइ एण्ड इयर केयर सेन्टरले सेवा सञ्चालनको अनुमति नलिई धमाधम उपचार गतिविधि सुरु गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रशासकीय अधिकृत ...